शनिबार, असोज ३, २०७७ गोदावरी न्युज
काठमाण्डौ -स्वास्थ्य सेवामा लागेकाहरुका लागि यो पटकको संविधान दिवस ऐतिहासिक र अविस्मरणीय रहनेछ। संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले प्रदान गर्ने विभिन्न विभुषण तथा अलङ्कार प्राप्त गर्ने झण्डै ६ सय नागरिकमध्ये १२३ भन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरु छन्।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विभूषण सुप्रसिद्ध प्रवल जनसेवा श्री प्रथम नै पटक चिकित्सकले पाएका छन्। आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका डा. सन्दुक रुइतलाई सो विभुषण प्रदान गरिएको छ।यो वर्ष देशका विभिन्न सेवा र क्षेत्रका गरेर ५९४ जना विभूषित भएका थिए ।
विभूषित चिकित्सकमध्ये त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आइसियु विशेषज्ञ डा. सुवास आचार्यदेखि प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण समूहको नेतृत्व लिएका डा. प्रेम ज्ञावली छन्। तीबाहेक कोभिड उपचारमा संलग्न डा. सन्तकुमार दास, मुटुरोग विशेषज्ञ अनिल भट्टराईसमेत छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ३, २०७७, १७:२७:००